wisdom | ZAYYA
အိန္ဒိယ တစ်နိုင်ငံလုံး အိမ်ရာ စွန့်ခွာလျက် ခြေသလုံး အိမ်တိုင် ခရီးသည်များ ဖြစ်သွားလျှင်လည်း စိုးရိမ်စရာ မရှိပေ။ ခြေသလုံး အိမ်တိုင် ခရီးလှည့်လည် သွားလာခြင်း သည် ဂုဏ်ပြု လေးစားအပ်သော အမည်နာမ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ အဆင့်အတန်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ အထူးအားဖြင့် ပထမ အဆင့် သြေလုံး အိမ်တိုင် ခရီးသည်များ ထဲတွင် သာမန် အရည်အချင်း ရှိသူများ မပါဝင် နိုင်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စာဖတ်သူ ပေါင်း များစွား တို့သည် ယခင်က ကျွန်ုပ်ရေးသား ခဲ့သော အခန်းကဏ္ဍ များကို ဖတ်လျက် ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ဖြစ်ကြပြီးလျှင် “ကောင်းတယ်၊ ပညာလည်း မသင်ရတော့ဘူး။ ဘာဆို ဘာမှ မလုပ်ရတော့ဘူး။ သွားမယ်။ ကမ္ဘာ တစ်ခွင် လှည့်လည် သွားလာရင် လမ်းတစ်လမ်းတော့ ပွင့်မလာဘဲ နေမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု အတွေးပေါ် လာကောင်း ပေါ်လာ ကြပေလိမ့်မည်။
ယင်းသို့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ တွေးသူများ ခြေသလုံး အိမ်တိုင်ခရီးသွားခြင်း လမ်းပေါ် လျောက်သွားလျှင် အဆင့်မြင့် စံနမူနာ များကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ အဆင့်မြင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိဖို့ရန် အတွက် လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန် တာဝန် ဝတ္တရား များ လိုအပ်သည်။
သူငယ်များ လည်း ခြေသလုံး အိမ်တိုင် ခရီးလမ်းမ ပေါ် လျောက်သွားနိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ် ပြောပြပြီးခဲ့ပြီ။ လုလင်ပျို၊ လုံမပျို များ အတွက်မှာမူ ပြောစရာ အထူး မလိုပေ။ သို့ရာတွင် လူငယ်တိုင်း၏ ယင်းကဲ့သို့ ကြိုးပမ်းမှုသည် အောင်မြင်မှု ရရှိလိမ့်မည်ဟု ဂရန်တီ မပေးနိုင်ပေ။
ခြေသလုံး အိမ်တိုင် ခရီးသည်သည် လူ့လောက အပေါ်တွင် ဝန်ပိမနေရပေ။ လူ့လောက နှင့် ကမ္ဘာလောက ရှိ ဒေသတိုင်းက လူများက သူ့ကို အကူအညီ ပေးကြ လိမ့်မည်ဟု ခြေသလုံး အိမ်တိုင် ခရီးသည် သည် မျှော်လင့်ချက် ထားပေလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ခြေသလုံး အိမ်တိုင် ခရီးသည်သည် ကမ္ဘာလောကမှ ရရှိတာထက် အဆပေါင်း များစွာ ပိုပြီး ကမ္ဘာလောက အား ပေးရလိမ့်မည်။ ယင်းအမြင်ဖြင့် အိမ်ရာကို စွန့်ခွာ ထွက်သွားသူ သည်သာလျှင် အောင်မြင်သော၊ ထင်ပေါ်ကျော် ကြားသော ခြေသလုံး အိမ်တိုင် ခရီးသည် ဖြစ်လာနိုင်ပေသည်။
ခြေသလုံး အိမ်တိုင် ခရီးသည် မျိုးစေ့ကိုမူ မဆွကပင် စိုက်ပျိုး နိုင်သည်။ ဤစာအုပ်ကို ဖတ်သော၊ နားလည် သဘော ပေါက်သော သူငယ် သူငယ်မ တို့သည် အဖျင်းဆုံး ဆယ့်နှစ်နှစ် အရွယ်လောက်တော့ ရှိကြပေ လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆယ့်နှစ်နှစ် ဆယ့်သုံးနှစ် အရွယ်ရှိ စာဖတ်သူ များသည် ဤစာအုပ်ကို ဂရုစိုက်၍ ဖတ်ကြ စေချင်သည်။ စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာအောင် ထားကြစေချင်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုအရွယ်၌ အိမ်က စွန့်ခွာ ထွက်သွား လိုသည့် ဆန္ဒကို ဖုံးဖုံး ဖိဖိ လုပ်ထားနိုင်လျှင် အလွန် ကောင်းပေ လိမ့် မည်။။ ယင်းသို့ ပြုလုပ်သည့် အတွက် အအကျိုးယုတ် စရာ အကြောင်း မရှိပေ။
ကျွန်ုပ် စာဖတ်သူ လူငယ် များသည် အထက်ပါ ကျွန်ုပ် ရေးသားသော စာကြောင်းများ ကို ဖတ်ပြီး ကျွန်ုပ် အပေါ် မယုံသင်္ကာ ဖြစ်ကြပြီးလျှင် ကျွန်ုပ်အား သူတို့ မိဘ များ ၏ သူလျှို ဟု ထင်လျက်သူတို့၏ လုံ့လ ဥဿဟ ကို ဖိနှိပ်ပြီး သူတို့ကို နောက်ပြန် ဆွဲ လိုသည်ဟု အပြစ်တင် ကြပေလိမ့်မည်။ ယင်းသို့ အပြစ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ် နှင့် ပတ်သက်၍ မတရား ပြုမူ ရုံမျှသာ မက သူတို့အတွက်လည်း အကျိုး မရှိဟု ပြောရလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ် ပထမ ဆုံး အကြိမ် အိမ်က ထွက်ပြေး၍ ဗာရာဏသီ ရောက်သွားချိန် က ကျွန်ုပ်၏ အသက်သည် ကိုးနှစ် မကျော်သေးပေ။ ကျွန်ုပ်၏ ဦးလေးက ကျွန်ုပ်ကို လက် ဆွဲပြီး ဂင်္ဂါဖြစ် ဆိပ် ခေါ်သွားသည်။ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် မိမိ ကို စော်ကားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ် ထင်မှတ်သည်။ ကျွန်ုပ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လွတ်လွတ် လပ်လပ် တစ်ယောက် တည်း ဗာရာဏသီ အနှံ့သွားပြီး ကိုယ် လိုချင်သည့် စာအုပ် များကို ဝယ်ယူလိုသည်။
တစ်နေ့ ကျွန်ုပ် တိတ်တိတ် ကလေး ဦးလေး အိမ်က ထွက်ပြီး ဗာရာဏသီ မြို့တွင်း နှစ်မိုင် သုံးမိုင်လောက် လည်ပစ်လိုက်သည်။ ကိုးနှစ် အရွယ် သူငယ်တစ်ယောက် ရွာသိမ် ရွာငယ် ရွာတစ်ရွာက လာပြီး ဗာရာဏသီ မြို့ လမ်းကြို လမ်းကြားထဲ လမ်းလျောက်ခြင်း သည် အန္တရာယ် ရှိသည် ဆိုသည့် အချက်မှာ ယုံမှား သံသယ ဖြစ်ဖွယ် မရှိပေ။ သို့သော်လည်း ခြေသလုံး အိမ်တိုင် ခရီးသည်၏ အတွင်းငုပ် နေသော ဗီဇသည် ယင်းသို့ အားဖြင့် ပထမဦးစွာ ပြူထွက် လာသည် ဆိုသည်ကို ထို အချိန်က ကျွန်ုပ် မသိ နားမလည်ပေ။
နောက်တစ်ကြိမ် စွန့်စားခြင်းမှာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် စွန့်စားခြင်း များထဲက ဆယ့်လေးနှစ် အရွယ်က ပြုလုပ်သော ပထမဆုံး စွန့်စားခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် လည်း အမှန်တကယ် ခြေသလုံး အိမ်တိုင် ခရီးသွားခြင်း ကျင့်စဉ်ကို ကျင့်သုံးခွင့် ရခြင်းမှာမူ ၁၆ နှစ် အရွယ်က ဖြစ်သည်။ မိမိ ၏ စာဖတ်သူများသည် ကျွန်ုပ်၏ အတု ကို ယူကြမည် ဆိုလျှင် ထိုစာဖတ်သူ များအား ကျွန်ုပ် မကန့်ကွက်။ မဟန့်တား လိုပေ။ သို့သော်လည်း စာဖတ်သူများ အား ကျွန်ုပ် ၏ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြ လိုသည်။
တချို့ အကြောင်းအရာများကို ကြိုတင် သိထားလျှင် လူ့ဘဝ၏ ဆယ့်နှစ်နှစ် လုပ်ရမည့် အလုပ်ကို နှစ်နှစ်တည်းနှင့် လုပ်၍ ရသည်။ နှစ်နှစ် လုပ်ရမည့် အလုပ် အတွက် ဆယ့်နှစ်နှစ် လှည့်လည် သွားလာခြင်းသည် အချည်းနှီး အလဟဿ သာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခြင်း မဟုတ်ပေ။ တစ်ချို့သော ပုဂ္ဂိုလ် များအတွက် ဆယ့်နှစ်နှစ် လှည့်လည် သွားလာခြင်း သည်လည်း အလွန် တန်ဖိုး ရှိသော အလုပ် ဖြစ်သည်။
Filed under wisdom Tagged with ဃူမက္ကရ, ပါရဂူ, သျှတ္တရ, အိန္ဒိယ, education, traveller, wisdom
ယနေ့ စာပေ ဝေဖန်ရေး
ကိုယ်ခံစားရသည်ကို ဖော်ပြခြင်းသည် ဝေဖန်ခြင်း မဟုတ်။
အောက်ပါ “ယနေ့ စာပေ ဝေဖန်ရေး” စာကို ဆရာဇော်ဇော်အောင် ရေးပါသည်။ စာပေ ဝေဖန်ရေး ဆိုသည်မျိုးကို ကျနော် ဘလော့ ပေါ်တွင် အတတ်နိုင် ဆုံး ရှောင်ပါသည်။ အခု တင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းရှိပါသည်။
တင်ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းတွေက တစ်ခု မက ပေါင်းဆုံပါသည်။ အနီးစပ်ဆုံး ဥပနိဿယ ကို ဆိုရလျှင်တော့ ဘလော့ဂါလေး တစ်ယောက် ဖြစ်သည့် ကျနော့ ညီမ တစ်ယောက် ဘာမသိညာမသိ အဝေဖန်ခံလိုက်ရသည် ကြားမိ၍ ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ စာရေးသည် ဖြစ်စေ၊ ပရင့်တက်မီဒီယာတွင် စာရေး သည် ဖြစ်စေ ရေးသည့် စာရှိလျှင် ဖတ်သည့်သူ ရှိမည်။ ဖတ်သည့်သူ ရှိလျင် ဝေဖန်မည့်သူလည်း ရှိမည်သာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် စာရှိ၍ စာဖတ်သူ ရှိခြင်း သည် ရိုးစင်း သော်လည်း စာဖတ်သူ ရှိ၍ ဝေဖန်မှု ရှိရခြင်းကမူ ထင်သလောက် မရိုးရှင်းလှ ဟု ထင်သည်။
စာဖတ်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက်က မိမိဖတ်သောစာကို ကြိုက်ချင် ကြိုက်မည် ။ မကြိုက် ဘဲလည်း နေနိုင်သည်။ စာဖတ်သူတွင် အခွင့်အရေးက လွတ်လပ်စွာ တည်ရှိသည်။ စာရေးသူကလည်း အလားတူ။ ၎င်း ရေးချင်သော စာကို ရေးပေလိမ့်မည်။ ၎င်းရေးပြီး စာကို ၎င်းဘာသာပင် မကြိုက်ဘဲလည်း နေနိုင်သည်။ ၎င်း တစ်ယောက်တည်း ကြိုက်မည်ဆိုလျှင်လည်း ကြိုက်နိုင်သည်။ စာရေးသူ၏ လွတ်လပ်သော အခွင့်အရေးသာ ဖြစ်သည်။
ပြောရန်လိုသည်က ဝေဖန်ရေးဖြစ်သည်။ “ဒီဟာကို ငါမကြိုက်ဘူးကွာ” ပြောရုံမျှဖြင့် ဝေဖန်ရေး မဟုတ်ပေ။ “ဒီစာကြီးက ဘာကြီးမှန်းမသိဘူး” “ဒီစာက အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး”ဟု ပြောရုံဖြင့်လည်း ဝေဖန်ရေး မဟုတ်ပေ။ ( အောက်ပါ စာတွင် တွေ့ကြရမည့် အတိုင်းပင် ) ဝေဖန်ရေးသည် တက္ကသိုလ်သင် ပညာရပ်ကြီး တစ်ခု မဟုတ်သော်လည်း ဝေဖန်ရေး အလုပ်သည် အခြေအမြစ်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ သာမာန်ညောင်ည ပြောရုံ ဆိုရုံဖြင့် ဝေဖန်ရေး ဖြစ်မလာပေ။ ယင်းသို့ အပြောအဆို ခံရရုံမျှဖြင့်လည်း စာရေးသူက ( စာရေးဆရာက ) မိမိ အဝေဖန်ခံလိုက်ရသည်ဟု မမှတ်အပ်ပေ။
သို့ဆိုလျှင် ဝေဖန်ရေး ဆိုသည်မှာ အဘယ်ကို ခေါ်ပါသနည်း။ အဘယ်ဟာများ ဖြစ်ပါသနည်း။ “ဝေဖန်ရေး” ဟူသော စကားလုံးကို ကျနော် မပြောလို မဆိုလိုသောကြောင့် ဤနေရာတွင် ကျနော့သဘောထား ဘာမျှ မပြောလိုပါ။ ဖတ်မိသလောက်များထဲမှ သဘောတရား အရှုပ်အထွေးမပါသော၊ သာမာန် နားလည်လွယ်လောက်သည့် ဆရာဇော်ဇော်အောင်၏ ထင်မြင်ချက် အချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အလျင်းသင့်မှ ဆက်လက်တင်ပြသွားလိုပါသည်။ ကျေးဇူး။
ယနေ့ စာပေ ဝေဖန်ရေး – ဇော်ဇော်အောင်
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ စာပေဝေဖန်ရေး မလိုအပ်ဟု ပြောသူ တစ်ယောက်တစ်လေမှ ပေါ်ခဲ့ဖူးသည်ဟု မကြားမိပါ။ ကမ္ဘာ့စာပေ လောကမှာတော့ ပေါ်ခဲ့ဖူးသည်ဟု ကြားဖူးပါသည်။ သို့တိုင်အောင် စာပေ ဝေဖန်ရေး သည် ကမ္ဘာ့စာပေ လောကတွင် ထွန်းကား တည်ရှိနေပါသည်။ ငြင်းခုံနေဆဲ၊ တစ်ယောက် အယူအဆ ကို တစ်ယောက်က ကန့်ကွက်နေဆဲ၊ အယူအဆဟောင်းကို အသစ်က ချေဖျက်နေဆဲ၊ အတိုချုပ် ပြောရလျှင် ပူညံပူညံ ဖြစ်နေကြဆဲ ပင်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အနုပညာသမား ( စာရေးဆရာများ ) အနုပညာအသစ် အသစ်တွေကို ဖန်တီးနေကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ စာပေ အနုပညာ ရှိနေသမျှတော့ စာပေ ဝေဖန်ရေး ရှိနေပါဦးမည်။
Filed under essay, Literature, wisdom Tagged with criticizm, essay, literature, mood, opinion, wisdom, word, zaw zaw aung
THE SIMPLE PHILISTINE believes that life is something infinite and unconditioned, and tries to look upon it and live it as though it left nothing to be desired. By method and principle the learned Philistine does the same: he believes that his methods and his principles are unconditionally perfect and objectively valid; so that as soon as he has found them, he has nothing to do but apply them to circumstances, and then approve or condemn. But happiness and truth are not to be seized in this fashion. It is phantoms of them alone that are sent to us here, to stir us to action; the average man pursues the shadow of happiness with unwearied labour; and the thinker, the shadow of truth; and both, though phantoms are all they have, possess in them as much as they can grasp. Life isalanguage in which certain truths are conveyed to us; could we learn them in some other way, we should not live. Thus it is that wise sayings and prudential maxims will never make up for the lack of experience, or beasubstitute for life itself. Still they are not to be despised; for they, too, areapart of life; nay, they should be highly esteemed and regarded as the loose pages which others have copied from the book of truth as it is imparted by the spirit of the world.
But they are pages which must needs be imperfect, and can never replace the real living voice. Still less can this be so when we reflect that life, or the book of truth, speaks differently to us all; like the apostles who preached at Pentecost, and instructed the multitude, appearing to each man to speak in his own tongue.
Filed under wisdom Tagged with advice, essay, experience, happiness, justice, language, monks, perfect, philosophy, schopenhauer, society, truth, wisdom
Tibetan Yoga ( intro: )
As soon as we heard the word as Yoga, we thought the sage as Fakee and Sardu ( the sages of India or the yogi ) . But, actually , Yoga is the way , I think ; The way of thinking or the way of behaviour lead to the liberation of something which may be the need of us. What is something? What is Yoga?
Is that Something Unexplainable-in-Human-Language? Then , how do we know of it? how do we get of it? At least , we know and need liberation of that Something. May be …………………..that is ,Death. isn’t it?
The word Yoga (frequently appearing in our annotations to the Bardo Thodol text), derived from the Sanskrit root yuj, meaning ‘ to join’, closely allied with the English verb to yoke, impliesajoining or yoking of the lower human nature to the higher or divine nature in such manner as to allow the higher to direct the lower; x and this condition—essential to the successful application of the Bardo doctrines—is to be brought about by control of the mental process. So long as the field of the mind is occupied by such thought-forms and thoughtprocesses as arise from the false concept, universally dominating mankind, that phenomena and phenomenal appearances are real,astate of mental obscuration called ignorance, which prevents true knowledge, exists. It is only Read more of this post
Filed under Death, wisdom Tagged with being, birth, buddhism, concentration, death, illumination, illusion, liberation, mental, Nirvana, philosophy, psychology, real, reality, rebirth, truth, wisdom, yoga